Fampiharana mihazakazaka 10 ambony | Androidsis
Ignacio Sala | 28/07/2021 22:00 | Fampiharana Android
Rehefa nivoatra ny teknolojia finday avo lenta, any amin'ireo magazay fampiharana tsirairay ho an'ny fitaovana finday, dia azontsika atao ny mampiasa fampiharana marobe izay manararaotra ny fivoarana izay tsy maintsy nataon'ireto fitaovana ireto manaraha fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny GPS, haingam-pandeha, gyroscope ...
Na dia tsy fitaovana ahazoana aina loatra aza izy ireo, arakaraka ny habeny entiny miaraka amintsika rehefa mivoaka hazakazaka isika, ny smartwatches dia mety, mbola mila mivoatra ireto farany mba ho lasa mpisolo toerana mety. Mandritra izany fotoana izany dia asehonay anao eto ambany ny fampiharana mandeha tsara indrindra misy ao amin'ny Play Store.
2 Mihazakazaha amin'ny MapMyRun (Endomondo taloha)
3 GPS Strava: Racing sy bisikileta
5 Adidas Mihazakazaka amin'ny Runtastic
8 Mihazakazaka Zombies!
10 Pedometer maimaim-poana
Ny fampiharana Google hanaraha-maso ny hetsika ara-batana dia Google Fit, fampiharana iray izay manara-maso ny hetsika ara-batana rehetra amin'ny alàlan'ny finday avo lenta na azo anaovana. Raha tsy liana amin'ny firaketana ny làlana amin'ny alàlan'ny GPS ianao, fa aleo aloha ny hetsika nataonao fotsiny no tadiavinao, Google Fit dia mihoatra ny ampy.
Raha mandeha ny fotoana, tsy maharitra ny fampahalalana voatahiry ao amin'ny hetsika ara-panatanjahanao, dia afaka misafidy iray amin'ireo fampiharana samihafa asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity ianao. Google Fit dia misy ho anao misintona maimaim-poana ary misy kinova ho an'ny smartache.
Mihazakazaha amin'ny MapMyRun (Endomondo taloha)
MapMyFitness dia nividy ilay fampiharana malaza hanaraha-maso ny fanatanjahan-tena amin'ny taona 2020 Endomondo, fampiharana iray izay nanjavona tsy ho ela mba ho tafiditra ao amin'ny Corre amin'ny MapMyRun. Manolotra ity app ity ny asa fototra rehetra amin'ny fampiharana mihazakazaka: hafainganam-pandeha, elanelana, may ny kaloria sy ny fotoana, miaraka amin'ny tombony fanampiny azo ampifandraisina amin'ireo mpanaraka ny fanatanjahan-tena sy ny mpanara-maso ny tahan'ny fo.
Azontsika atao koa ny mampiditra angon-drakitra toy ny fanjifana sakafo ary manao a Araho ny elanelana voarakitra ao amin'ny kiraronao. Hampahafantatra anao ny fampiharana rehefa tonga ny fotoana hanovana azy ireo.
Ny fiasa mahaliana amin'ity fampiharana ity dia ny mety farito ny karazana hazakazaka: raha eo amin'ny fitoeran-tongotra ianao, amin'ny làlambe, amin'ny manodidina anao na mandeha amin'ny alika ... fampahalalana tena ilaina handinihana ny zava-bita.
Mihazakazaha miaraka amin'ny MapMyRun ho anao misintona maimaim-poana, tsy misy doka fa ny fividianana anaty fampiharana mba hamohana ny fidirana amin'ny endri-javatra rehetra.
Mihazakazaha amin'ny MapMyRun
GPS Strava: Racing sy bisikileta
Raha manavaka ny fanaonao amin'ny fanazaran-tena eo amin'ny fihazakazahana sy bisikileta, ny app Strava dia safidy tsara. Ny takelaka tsy manam-paharoa dia mirakitra ny lafiny antsipirihany kokoa amin'ny fampihetseham-batanao, toy ny fahazoana ny haavon'ny toerana ambony, miampy ireo metrika nentim-paharazana bebe kokoa toy ny hafainganana, ny halavirana ary ny fotoana.
Endri-javatra tsy manam-paharoa iray hafa dia ny Leaderboard, marika famantarana ary zava-tsarotra manosika anao hahatratra ny tanjonao. Ity fampiharana ity dia mety ho an'ireo izay te hihazakazaka ivelan'ny mahazatra.
Strava GPS dia misy ho an'ny misintona maimaim-poana, TSY mampiditra doka fa raha mividy in-app ianao mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fampiharana.
Strava GPS - Racing sy bisikileta
RunKeeper (avy amin'ny vondrona fanatanjahantena Asics) iray amin'ireo fampiharana voalohany hahatratra ny tsenan'ny finday hanaraha-maso ny hetsika ara-panatanjahantena eo am-pihazakazahana, fampiharana tsotra sy mora ampiasaina izy io izay mirakitra ny hafainganana, ny halavirana, ny kaloria may, ny fotoana ary maro hafa.
Azonao atao ny manamarina ireo hazakazaka nataonao teo aloha hanarahana ny fivoaranao ary ampiasao ireo zotra napetraka ao anatin'ny fampiharana hahita làlana vaovao.
Izy io dia iray amin'ny fampiharana mihazakazaka tsara indrindra ho an'ny vao manombokasatria manome tahirin-kevitra momba ny fihazakazahana izy hanampiana anao hiditra amin'ny fanazaran-tena vaovao ary mampiseho fampahalalana tena ilaina izay hankafizin'ireo mpihazakazaka ny haavon'ny fahaiza-manao.
RunKeeper dia azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Adidas Mihazakazaka amin'ny Runtastic
Fampiharana tena malaza iray hafa, Adidas Running App avy amin'i Runtastic, dia a fampiharana mihazakazaka fototra izay mampifandray amin'ny Google Earth mba hahamora ny fanarahana lalana, indrindra raha mihazakazaka amin'ny tanàna ianao.
Ny fanadihadihana an'ity fampiharana ity dia tsara, miaraka amin'ny sary sy latabatra izay asehoy ny fandrosoanao ary avelany hizara mora amin'ny tambajotra sosialy. Ny fampiharana dia misy kinova ho an'ny smartwatches izay ahafahantsika mifehy ny fizotran'ny fampiharana ary mahalala ny fandrosoana amin'ny fotoana rehetra.
Tonga miaraka programa fanofanana namboarina ary mifindrafindra amin'ny Spotify sy Pandora mihazakazaka amin'ny gadona mozika aza. Ity fampiharana ity dia mety ho an'ireo mpandeha mihazakazaka hatrany amin'ny tanàna vaovao sy ho an'ireo izay mitady tatitra manokana momba ny angon-drakitra mihazakazaka ananany.
Adidas Running by Runtastic dia misy ho anao endrika fisintomana maimaimpoana, misy doka sy fividianana fampiharana hampidirana ny fidirana amin'ny endri-javatra rehetra.
adidas Mihazakazaka amin'ny Runtastic - Mihazakazaka sy milamina
Iray amin'ireo orinasa fanatanjahan-tena toa an'i Asics sy Adidas, izay manolotra ihany koa fampiharana ho fanaraha-maso ny hetsika ara-panatanjahantena, hitantsika ao amin'ny orinasa Puma, lFirenena fanatanjahantena faha-XNUMX ao ambadiky ny Nike sy Adidas, ary toy ny Asics sy Adidas, dia avy any Alemana.
Pumatrac dia manolotra interface tsara miaraka amin'ny rehetra tombony amin'ny fampiharana fototra amin'ny fihazakazahana, fa miaraka amina asa fanampiny maro hanolorana fahitana manerantany ny fanazaran-tena.
Ny fampiharana dia manangona fampahalalana fanampiny izay mety hisy fiatraikany amin'ny asanao, toy ny toetr'andro, ny andro na ny volana, ary mamakafaka izany hahazoana loharanom-baovao manokana. Ohatra, mety ho hitanao fa mihazakazaka tsara ianao amin'ny zoma maraina alohan'ny 10, na mihazakazaka haingana kokoa ianao rehefa mihaino mozika rock.
Pumatrack dia misy ho an'ny misintona maimaim-poana tanteraka, TSY misy doka NA fividianana ao anaty ny fampiharana, Ka raha tsy te handany vola amin'ny fangatahana hanaraha-maso ny hetsika ara-panatanjahantena ianao, Pumatrack dia safidy tena tsara.
Fanatanjahantena an-trano PUMATRAC, fampiofanana, hazakazaka, fanatanjahan-tena
Mazava ho azy fa ny fangatahana avy amin'ny mpanamboatra entana Nike dia tsy tokony ho very amin'ity lisitra ity. Tsy mila manana vokatra Nike hankafy ny tombontsoa azo avy amin'ity fampiharana ity. ahafahantsika misafidy ilay faritra izay mihazakazaka (treadmill, làlana, sidewalk) handraketana ny hafaingantsika, ny halaviran-tsika, ny kaloria may ary ny fotoana.
Ny mampiavaka an'io fampiharana io dia ny safidin'ny gameplay zarao ny tanjonao manokana, fanamby ny namanao ary kapohy ny firaketanao manokana. Azonao atao koa ny mampakatra mozika manentana hilalao rehefa mila fampitomboana fanampiny amin'ny asanao ianao.
Nike Run Club dia misy ho anao misintona maimaim-poana tanteraka, TSY misy doka NA fividianana ao anaty ny fampiharana.
Raha amin'izao fotoana izao dia tsy ataonao matotra loatra ny olana amin'ny fanaraha-maso ny hetsika ara-batana ataon'izy ireo, azonao atao ny manomboka manara-maso izany amin'ny fampiharana Zombies Run, fampiharana izay manasa antsika hampiasa headphones hanentanana antsika hihazakazaka bebe kokoa ary Mandosira zombie maro be.
Rehefa mandeha ianao, a mifangaro tanteraka amin'ny tantara an-tsary sy hira amin'ny playlist anao manokana, handrisika anay hihazakazaka eo alohan'ireo zombie manenjika anay.
Mihazakazaka ny Zombies! misy ho anao misintona maimaim-poana, dia misy doka sy fividianana fampiharana izay ahafahantsika miditra amin'ireo fiasa rehetra atolotray anay ary manana kely na tsy misy na inona na inona halefa amin'ireo rindranasa asehonay anao ato amin'ity lahatsoratra ity izahay.
Zombies, Mihazakazaha! (Free)
Developer: Enina hanombohana
Na dia tsy dia fantatra loatra toy ny ankamaroan'ny fampiharana izay nasehoko anao tamin'ity lahatsoratra ity, Sports Tracker kely na tsy misy tokony hitsiriritra azy ireo. Noho io rindranasa io dia afaka mamadika ny finday avo lenta ho solosaina paosy izay hanara-maso ny hetsika ara-batana rehetra isika.
Ho fanampin'izay, mikarakara hamakafaka ny valin'ny fiofanana hampahafantarina anay ny fomba ahafahantsika mihatsara raha tsy misy fiatraikany amin'ny ratra mety hitranga ny fahamendrehantsika ara-batana. Ny iray amin'ireo tanjak'ity fampiharana ity dia ny fampidirana andian-tsarintany misy zotra efa voatondro ho an'ny bisikileta, ny lalana, ny dia an-tongotra ...
Sports Tracker dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy ny doka sy ny fividianana fampiharana mba hamohana ny fidirana amin'ireo fiasa rehetra atolotray antsika.
Sports Tracker mihazakazaka bisikileta
Miaraka amin'ity anarana mahaliana ity izay toa manasa antsika hanao rindran-damina, mahita fampiharana izahay miaraka amin'ny maherin'ny 800.000 hevitra sy salanisa 4,7 kintana, ka lasa iray amin'ireo rindranasa naoty tsara indrindra amin'ny alàlan'ny mpampiasa fampiharana mihazakazaka.
Ity fampiharana ity dia pedometer mpandeha an-tongotra rehetra ary manararaotra ny sensor izay natsangana tao anaty finday hanara-maso ireo dingana, mandeha sy mihazakazaka ary mandeha amin'ny interface tsy sarotra natao hihazakazaka any aoriana.
Afaka manaraka ny anao ny mpampiasa tantaram-pitiavana sy fironana, jereo ny làlanao, mamorona tanjona kendrena amin'ny fanatanjahan-tena, ary mandraisa anjara amin'ireo fanamby sy vondrona manentana mba hanampy endrika sosialy hanaovana fanatanjahan-tena. Ny fampiharana dia miasa miaraka amin'ny tobim-pahasalamana hafa toa an'i Google Fit, MyFitnessPal ary Fitbit
Ireo fiasa rehetra ireo dia misy maimaimpoana maimaimpoana, ny mpanjifa Premium dia manana fiasa fanampiny toy ny fampiofanana notarihina, drafitra fihenan'ny lanja, ny fahaizana mampifangaro haingana ny dingana isan'andro, ny halavirana ary ny angona hetsika hafa avy amin'ny fitaovana Garmin na Fitbit mankany amin'ny kaontinao Pacer (developer app).
Misy pedometer maimaim-poana ho anao misintona maimaim-poana, Ahitana dokam-barotra sy fividianana rindrambaiko ao anaty rindrambaiko mba hamaha ny fidirana amin'ireo fiasa rehetra atolotray azy ireo, endri-javatra izay tsy vitsy.
Pedometer maimaim-poana - Counter amin'ny dingana sy kaloria
Developer: Fahasalamana ara-pahasalamana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana mihazakazaka 10 ambony